DEG DEG: John Kerry oo soo gabagabeeyey socdaalkiisii Muqdisho – Radio Muqdisho
Xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in Soomaaliya ay ka taageerayaan arrimaha ammaanka, siyaasadda, bani’aadamnimada iyo dhismaha ciidammada qalabka sida ee Soomaaliya.
Shir jaraa’id oo uu xoghayuhu ku qabtay magaalada Muqdisho ayuu ku sheegay in dowladdiisu ay aad u soo dhaweyneyso horumarka ay dowladda Soomaaliya sameyneyso iyo guulaha laga gaaraya arrimaha ammanka.
Wuxuu sheegay in wada-shaqeynta dowladda dhexe iyo maamullada gobollada u dhaxeeya uu yahay mid dhiirri galin leh oo suurta galin kara horumarka uu hiigsanayo waddanku.
Sidoo kale waxuu soo dhaweeyay go’aanka dowladda Soomaaliya ee ah in doorasho ay waddanka ka dhacdo 2016-ka, iyo waliba dadaallada socda ee arrintaas lagu gaaranayo, isagoo ku boorriyay dowladda in la dhaqsi loo dhammaystiro waxyaabaha lagama maarmaanka u ah dhammaystirka hiigsiga 2016-ka.
Dhinaca kale John Kerry ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka taageerayaan dhismaha ciidammada qalabka, ayadoo tababarro iyo taageero kale ay ku caawinayso ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed.
Arrimaha ammaanka iyo la dagaallanka argagixixsada ayuu sheegay in dowladda Mareykanku ay ka caawinayso Soomaaliya.
Ugu dambentii xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in qaxootiga Soomaaliyeed ee ku jira xeryaha Dhadhaab ee Kenya ay xaq u leeyihiin inay helaan nolol wanaagsan oo ay guryahooda ku soo laabtaan. Dowladda Mareykanku inay taageero ku bixin doonto arrintaas ayuu saxaafadda u sheegay John Kerry.
Xoghayaha ayaa ka duulay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde, isagoo maanta socdaal saacado qaatay ku yimid magaalada Muqdisho oo uu kula kulmay madaxweynaha dalka, R/wasaaraha, madaxda maamullada gobollada iyo bulshada rayidka.
FAAHFAAHIN: Socdaalka John Kerry ee Muqdisho